Barca Oo Camp Nou Ku Dubatay Chelsea Una Gugubtay Wareega 8 CL Xili Leo Iyo Dembele Ay Shabaqa Gareen %
Barcelona ayaa waxay iska xaadirisay wareega Sideed dhamaadka ee tartanka xiisaha leh ee Champions League, kadib markii ay Camp Nou kaga gaareen dhigooda Chelsea guul weyn ciyaar uu Faras ka ahaa laacibka Lionel Messi.
Blaugrana ayaa waxay kulankaan ugu soo awood sheegatay kooxda reer England 3-0, waxaana goolasha ay kala dhaliyeen ciyaartoyda Barce labadda qeybood, maadaama Bogii koowaad lagu kala baxay 2-0, oo ay ciyaarta ku hogaamineyso Barca.
Lionel Messi oo hogaanka udhiibay Barcelona daqiiqadii 3aad iyo Osman Dembele, ayaa ka saaciday camaaliqada La Liga in qeybta nasiinada ay aadaan iyagoo rajo fiican ka leh inay usoo bixi doonan wareega Sideed dhamaadka ee koobka Dhaga-weyne.
Markii dib leyskugu soo laabtay ayaa waxaa daqiiqadii 63aad hogaanka usii dheereeyay Barcelona, ciyaaryahan Lionel Messi, kaasoo dhaliyay goolkiisii labaad ee kulankaan, isagooan kulankaan si weyn uga soo dhex-muuqday.
Barca ayaa waxay haysatay kubadda 57% taasoo ka dhigneed inay ahayd kooxdii ciyaarta maamuleysay, inkastoo Blues ay sameysay dhowr fursadood, kuwaasoo halisyo badan ku abuuri karay Bluagrana, xitaa waxaa jirtay in birtay laga garaacay.
Intii uu kulanka socday Barcelona ayaa waxay sameysay 9 qalad, halka Blues ay gashay 14 qalad, waxaana intaas dheer in la bixiyay Afar Kaar, oo ahaa Jaalo, saddex kamid ah, Blues ayaa loo taagay ciyaartoydeeda halka mid kale, la siiyay mid kamid ah xidigaha Barcelona.
Sikastaba, kulanka ayaa wuxuu ugu dambeyn uu kusoo dhamaaday 3-0, oo ay guusha ku raacday Barcelona, waxayna wadar ahaan ay tahay 4-1, maadaama lugtii koowaad oo garoonka Blues lagu soo dheelay ay wada galeen labada dhinac 1-1.
Blaugrana ayaa ku biirtay liis-koox illaa iyo Todoba gaaraya, kuwaasoo iska xaadiriyey wareega Sideed dhamaadka ee Champions League, kaasoo Isku aadkiisa la sameyn doono hadii uu ALLE raali ka noqdana aan idin soo gudbin doonaa maalinta Jimcaha ee Isbuucan.
Bayern Munich Oo Xasuuqday Besiktas Iskana Xaadirisay Sideed Dhamaadka CL [Sawiro]